जीवन रक्षा – Himalaya Television
डा. केसीको जीवन रक्षामा सबै संवेदनशील बन्नुपर्छः प्रवक्ता श्रेष्ठ
२४ असोज, २०७७, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सबै संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आमरण अनशनमा बसिरहनु भएका डा. केसीको...
डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै वीरगञ्जमा प्रदर्शन
२१ असोज, २०७७ पर्सा । डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै वीरगञ्जमा प्रदर्शन भएको छ । चिकित्सक, अधिकारकर्मी, विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र राजनीतिक दलमा आवद्ध व्यक्तिले वीरगञ्जको घण्टाघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागीले डाक्टर केसीका माग पूरा...
१७ असोज, २०७७ काठमाडौं । डाक्टर गोविन्द केसी आमरण अनशनमा बसेको आज २० दिन भयो । केसीको ज्यान खतरामा रहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । तर सरकारले अहिलेसम्म कुनै चासो देखाएको छैन । सरकारले सुन्दै नसुनेपछि दिनहुँ केसीको समर्थनमा प्रदर्शन...
डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि वार्ता गर्न सरकारसँग चिकित्सक संघको आग्रह
१४ असोज, २०७७ काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । संघले विज्ञप्ति निकालेर १७ दिनदेखि अनसन बसेका केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दा पनि सरकारले जीवन रक्षाका लागि कुनै...
९ असोज, २०७७ काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले विज्ञप्ति निकालेर चिकित्सा शिक्षाजस्तो आधारभूत मानव अधिकारको विषयप्रति संवेदनशील हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । विगतमा भएका सम्झौता...
डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न माग गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन
३ असोज, २०७७ काठमाडौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने लगायतका माग राखेर जुम्लामा सत्याग्रह बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य बिग्रदै गएको छ । डाक्टर केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै भदौ २९ गतेदेखि अनसन बसिरहनुभएको...
डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न नेपाल चिकित्सक संघको माग
२ असोज, २०७७ काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले भदौ २९ गतेदेखि जुम्लामा १९ औं सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।...
बजेटले कोरोना प्रभावित जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने कांग्रेसको निष्कर्ष
१६ जेठ, २०७७, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने बताएको छ । शुक्रबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बजेट प्रचारमुखि मात्रै भएकाले यसले जनताको जीवन रक्षा गर्न नसक्ने निष्कर्ष...